🥇 ▷ Realme 5 iyo Realme 5 Pro, taleefanno cusub oo dhex dhexaad ah oo leh afar kamaradood ✅
Realme 5 iyo Realme 5 Pro, taleefanno cusub oo dhex dhexaad ah oo leh afar kamaradood
Realme, oo ah astaanta labaad ee Oppo, ayaa ku dhawaaqday xarumo cusub oo dhexdhexaad ah iyo bartamihii-dhexe / sare. Waxaan ka wada hadalnay Realme 5 iyo Realme 5 Pro. Taleefannadan casriga ah Waxay u taagan yihiin inay yeeshaan kamarad weyn oo afarta gees leh, batteriga weyn iyo naqshad qurux badan. Waxaan kuu sheegay dhammaan qeexitaanadeeda, astaamaha iyo qiimaheeda.
Realme 5 iyo Realme 5 Pro waxay leeyihiin naqshad isku mid ah, si aad ah looma jiraan farqi u dhexeeya labada moodel, dhinaca muuqaal ahaana ma heli doonno. Gadaalku wuxuu ka samaysan yahay galaas, oo leh dhalaalaya dhalaalaya nooc rhombus ah oo ka dhigaya mid aad u fiican. Isla gadaashiisa waxaan ku aragnaa kamarad Quad ah. Waxay ku taal aagga bidix, oo meel toosan taagan. Waxaan sidoo kale ku aragnaa akhristaha faraha faraha xarunta. In kasta oo Oppo ay horay ula shaqeysay akhriste faraha oo shaashadda ah, waxay u badan tahay inay go’aansadeen inay gadaal ugu daraan si ay u kaydiyaan kharashaadka.
Dhanka hore, waxaan ka helnaa Nooca ‘gota dhibic’ notch aagga sare iyo jir ugu yaraan qayb hoose. Hadalka loogu yeerayaa wuxuu ku yaal qeybta sare, sida caadiga ah aaladaha noocan ah.
Oppo Realme 5 iyo 5 Pro, muuqaalada
Cabirka iyo culeyska: 164.4 x 75.6 x 9.3 mm / 157 x 74.2 x 8.9 mm
Shaashadda: 6.5 ”leh HD + / 6.3” xalka oo leh HD oo dhan + xalin
Processor: Qualcomm Snapdragon 665 / Qualcomm Snapdragon 712
RAM: 3 ama 4 GB / 4, 6 ama 8 GB
Kaydinta: 32, 64 ama 128 GB / 64, 128 GB
Kaameera maamulaha: 12 MP + 8 megapixels xagal ballaadhan + 2 Megapixels macro + 2 megapixels qoto dheer
Kaameera maamulaha nooca Pro: 48 MP + 8 megapixels xagal ballaadhan + 2 Megapixels macro + 2 megapixels qoto dheer
Kaameera hore: 13 MP / 16 MP
Durbaan: 5,000 mAh / 4,045 mAh
Isku xirnaanta: WI-FI, 4G, LTE, NFC, Bluetooth, GPS…
Nooca ee Android: Android 9.0 cag
Kuwa kale: USB C, akhristaha faraha
Halka aan ku aragno farqiga u dhexeeya labada moodel ayaa ah astaamaha. Oppo Resume 5 waxay leedahay astaamo aasaasi ah oo dheeraad ah, sida Snapdragon 665 processor oo leh 3 ama 4 GB oo RAM ah iyo 32, 64 ama 128 GB oo ah xusuusta gudaha. Dhanka kale, qaabka Pro wuxuu leeyahay Snapdragon 712 (xoogaa xoog badan) oo leh RAM oo ah 4, 6 ama 8 GB iyo xusuusta gudaha ah ee 64 iyo 128 GB. Shaashada shaashadda, waxaan ku aragnaa in Realme 5 ay ka weyn tahay (6.5 inji vs. 6.3 ee nooca Mod). Laakiin qaraarku waa hoose: HD + iyo Full HD + siday u kala horreeyaan.
Qeybta sawirka waxaa sidoo kale jira farqiga u dhexeeya. Labaduba waxay leeyihiin kamarad afargeesood ah. Aaladda ugu weyn ee Realme 5 waa 12 megapixels, halka Realme 5 Pro ay kor uqaadeyso qalabka loo yaqaan ‘Sony 48 megapixel sensor’. Kaamerooyinka kale waa isku mid: 8 xagal ballaaran oo MP ah, 2 MP qoto dheer oo garoonka ah iyo lenjo yar yar, sawiro masaafo gaaban, oo ah 2 Megapixels.